TURKIGA OO MAREYKANKA UGA BAAQAY IN UU JOOJIYO TAAGEERADA UU SIIYO KURDIYIINTA | Saxil News Network
TURKIGA OO MAREYKANKA UGA BAAQAY IN UU JOOJIYO TAAGEERADA UU SIIYO KURDIYIINTA
Ankara:-(saxilnews.com) Turkiga ayaa Mareykanka ku baraarujiyay in uu joojiyo taageerida uu siiyo Kurdiyiinta YPG ee Suuriya. Wuxuuna sare u sii qaaday duullaanka uu ku hayo malleeshiyada oo ka dagaallanta Waqooyiga dalka Suuriya.
Afhayeen u hadlay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in kooxda YPG ay hubka Mareykanka ay ka hesho u adeegsato ciidammada gobolka Cafrin nadiifinaya.
Turkiga ayaa sheegay in YPG ay tahay garab ka tirsan ururka PKK oo ka dagaallama gobolka Kurdiyiinta eeTurkiga, waxayna ku tilmaamtay in ay argagixiso yihiin.
Balse YPG ayaa beenisay in wax xiriir toos ah uu kala dhexeeyo PKK.
Malleeshiyada oo maamusha deegaanno badan oo ka tirsan Waqooyi-Bari Suuriya, waxay xulafo muhiim ah Mareykanka ka la yihiin dagaalka ka dhanka ah ururka la baxay dowladda Islaamka.
Golaha Amniga ee Qaramada Midoobey ayaa kullan Isniintii dhacay uga wada xaajooday duullaanka sii kordhaya ee Turkiga, balse muusan cambaareyn.
Xukuumadda Ankara waxay hadda dalbaneysaa in la joojiyo is xulafeysiga Mareykanka iyo YPG ka dhexeya. Maamulka Erdogan wuxuu ku doodayaa in uu dhammaaday dagaalka lagula jiro ururka la baxay dowladda Islaamka.
“Uma dulqaadan karno in PKK ay wax dowlad shabaha ka sameysato xudduuda aan la wadaagno Suuriya,” ayuu ku hanjabay afhayeenka madaxtooyada Ibraahim Kalin.
Kumannaan qof oo shacab ah ayaa ka qaxaya gobolka Cafrin. Dadka u ololeeya arrimaha Suuriya waxay sheegayaan in inkabadan 70 qof la dilay tan iyo markii Sabtidii uu bilowday duullaanka Turkiga.
Lahaanshaha sawirkaAFPImage captionDiyaaradaha dagaalka ee Turkiga ayaa duqeeyay saldhigyada YPG ee Waqooyiga Suuriya
Xilli sii horeysay, madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa wacad ku maray in “lagu kala bixi doono” Cafrin. “Tallaabo Dib uma noqon doonno,” ayuu ka yiri khudbo toos looga baahinayay telefishin.
“Arrintan waxaan kala hadalnay saaxiibbadeena Ruushka; waxaan gaarnay heshiis.”
Maxaa ka dhacaya goobaha dagaalka?
Isniintii, dadka deggan tuullooyiinka Shankal, Qorne, Bali iyop Adah Manli ee gobolka Cafrin waxay sheegeen in la qabsaday, sidoo kalena Turkiga uu la wareegay deegaanno yaryar sida Kita, Kordo iyo Bibno, sida ay ku warrantay wakaaladda wararka dowladda Turkiga ee Anadolu.
Ururka YPG wuxuu beeniyay in deegaan ka mid ah gobolka Cafrin ay maamulaan ciidammada Turkiga.
Sidoo kale waxaa lagu warramay in ay iska caabiyeen ciidammada dhulka ee Turkiga ayna madaafiic ku garaaceen saldhigyada duullaanka Turkiga ee ku yaalla xadka, sida warbaahinta gudaha ay sheegeen.
Laba qof ayaa dhimatay 12 kalena way dhaawacmeen ka dib markii madfac uu ku dhacay saldhig ay deggan yihiin mucaaradka Suuriya oo ku dhow xuduudda Turkiga.
Muxuu ka dhashay duullaanka?
Ciidammada dhulka ee Turkiga oo garab ka helaya dagaalyahannada mucaaradka Xureynta Suuriya (FSA), ayaa xadka ka gudbay Axaddii iyagoo wada howlgal dib loogu riixayo ururka YPG.
Ra’iisul wasaaraha Turkiga Binali Yildirim wuxuu sheegay in ujeedada dagaalka uu yahay in 30km laga dhiggo “aagga cas” oo la gaarsiiyo illaa gudaha Suuriya.
Madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa ku dhaartay in YPG loo baabi’in doono “si degdeg ah”.
Lahaanshaha sawirkaGETTY IMAGESImage captionTaangiyada Turkiga oo siigalaya Waqooyiga Suuriya
Qorshayaasha howlgalka waxaa la aaminsan yahay in la dardar gelinayay ka mid markii horraantii bishan uu Mareykanka sheegay in uu garab siinayo isbeheysiga Xoogga Dimuquraadiyadda Suuriya ee SDF oo ay aad ugu badan yihiin YPG.
Mareykanka ayaa xilligaasi sheegay in la dhisayo ciidammada amniga xuduudda si looga hortago in ay dib isu soo abaabulaan mintidiinta Daacish.
Qiyaastii 25,000 oo ah dagaalyahanno taageersan Turkiga ayaa qeyb ka ah duullaanka, Taliyaha mucaaradka Maj Yasser Cabdul Raxim ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay sidaas.
Balse ma cadda tirada ciidammada Turkiga ee u tallaabay dhanka dalka Suuriya.
Jawaab celintii hore:
Madaxweynaha Suuriya Bashar al-Asad wuxuu cambaareeyay duullaanka, wuxuuna sheegay in Turkiga uu taageerayay argagixisada
Ruushka – oo taageero muhiim u ah madaxweyne Asad – ayaa sidoo kale sheegay in uu duullaanka ka walaacsan yahay, wuxuuna gobolka Cafrin kala baxay qaar ka mid ah ciidammadiisa.
Iraan iyo dalalka kale ee xulafada la ah Suuriya ayaa dalbaday in Turkiga uu si degdeg ah u hakiyo howlgalka “si looga baaqsado in dhibaato kale oo qotodheer ay ka dhacdo Suuriya.
Madaxa arrimaha diblumaasiyadda ee Midowga Yurub, Federica Mogherini, ayaa sheegtay “in aad ay uga walaacsan tahay” duullaanka